Global Voices teny Malagasy » Maika Loatra Nanohana ny Daroka Baomba ao Syria Ilay Mpitari-Dalan’ny Runet, Ka Miatrika Sazy An-tranomaizina Ankehitriny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2016 4:24 GMT 1	 · Mpanoratra Isaac Webb Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Rosia, Syria, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Anton Nossik. Sary: Valerij Ledenev, Flickr, CC 2.0
Tamin'ny Alatsinainy, nampanantsoin'ny mpampanoa lalànan'ny fanjakana Rosiana ilay bilaogera sady mpanohitra malaza Anton mba hosaziana roa taona any amin'ny toby fanasaziana manokana noho ny famoahana “fanambarana mahery fihetsika” an-tserasera. Voampanga tamin'ny volana Febroary i Nossik, iray amin’ ireo “ray mpamorona ” ny aterineto Rosiana noho ny famoahana lahatsoratra bilaogy  tao amin'ny kaontiny Live Journal izay mitondra ny lohateny hoe “Fafao Tsy ho Ety Ambonin'ny tany i Syria.”
Nilaza ireo mpampanoa lalàna fa nanitsakitsaka ny andininy faha-282 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Heloka Bevava Rosiana i Nossik, “fitarihana fankahalana na fifandirana, ary koa fanambaniana ny Fahamendrehana maha olombelona”, izay mitarika sazy farany ambony indrindra hatramin'ny 4 taona an-tranomaizina.
Mbola hita ao amin'ny kaonty Live Jounal an'i Nossik ny lahatsoratra nahatonga ny fiampangana izay nivoaka tamin'ny 1 Oktobra 2015, herinandro vitsy monja talohan'ny nanombohan'i Rosia ny hetsika daroka baomba ho fanohanana ny filoha Syriana Bashar al-Assad. Toa nanohitra  an'i Kremlin ity mpitoraka blaogy ity tamin'ny alalan'ny fanehoana fanoherana misokatra sy sahisahy tamin'ny fitondran'i Assad. Tao amin'ny lahatsoratra, miantso ny fanapoahana baomba ao amin'ny faritra fehezin'ny governemanta Syriana, izay nampitahaina teo aloha  tamin'ny Alemaina Nazi i Nossik, olom-pirenena Israeliana:
Nandritra ny 70 taona farany, tsy nahita na inona na inona avy ao Syria ny Atsinanana Akaiki[-n'i Eoropa] afa-tsy ny herisetra, ady, fihinana olona, faharavana, ary fitomaniana. Hatramin'ny taona 2011, nanondrana izany horohoro rehetra izany tao amin'ny firenena manodidina izy ireo, saingy tamin'ny 2011, nanomboka nijinja ny voa nafafiny izy ireo. Tsara ho azy ireo izany ary tsy miala tsiny aho. Ny sisa tavela dia ny fandravana azy ireo, amin'izay tsy aondrana any Eoropa ny Jihad.
Miziriziry hatrany i Nossik fa tsy manan-tsiny izy, saingy nilaza tamin'ny Alatsinainy fa vonona hisazy ary manantenana hisarika ny saina manoloana ‘ny fomba fanaon'ny governemanta Rosiana amin'ny “fiampangana olona noho ny hevitr'izy ireo.” Namoaka  tsanganana amin'ny fitakian'ny mpampanoa lalàna amin'ny Facebook i Nossik tamin'ny Alatsinainy saingy tsy naneho hevitra fanampiny.
Toa lasa lavitra loatra tamin'ny fanehoana ny finoany tao amin'ny Akon'i Moskoa, radio liberaly lehibe ao Rosia i Nossik, tamin'ny andro namoahany tsanganana tao amin'ny bilaoginy. Nilaza izy fa nanambara taminy ny mpiara-miasa aminy ao amin'ny Akon'i Moskoa fa nanao fahadisoana izy tamin'ny “fampifangaroana ny aterineto amin'ny onjam-peo,” maneho fa hentitra kokoa ny famerana ny fahalalaham-pitenena ao amin'ny radio noho ny amin'ny aterineto. Niaro tena i Nossik tamin'ny fanamarihana fa niditra tao amin'ny fandaharana “Hevitra Manokana” tao amin'ny radio izy, izay nolazainy fa natao ho an'ny olona manana fomba fijery hafa amin'ny “fiampitàna ny tsipika [tsy azo ihoarana].”
Niteny tamin'ny anaran'i Nossik nandritra ny fotoam-pitsarana azy ny Lehiben'ny Rabbi an'i Rosia sy ny mpampianatra avy ao amin'ny Oniversitem-panjakan'i Moskoa. Nandritra izany, nijoro vavolombelona ny manam-pahaizana amin'ny haiteny avy ao amin'ny Ivontoerana Fanadihadiana Heloka Bevava ao amin'ny Sampam-piarovana Federaly (FSB) fa nahitana “fanambarana eksitiremista” ny lahatsoratr'i Nossik.
Mpikambana ao amin'ny fanoherana ao Rosia i Nossik ary matetika niteny momba ny famoretan'i Kremlin amin'ny fahalalahan'ny aterineto. Iray amin'ireo bilaogera voalohany malaza ao Rosia, nanangana ny Gazeta.ru sy Lenta.ru, roa amin'ireo tranonkala malaza indrindra ao amin'ny firenena izy.
Fantara fa hivoaka amin'ny 3 Oktobra ny didim-pitsarana an'i Nossik.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/22/88823/
 nampanantsoin'ny : http://tass.ru/proisshestviya/3633493
 ray mpamorona: https://meduza.io/en/news/2016/04/26/police-charge-one-of-the-russian-internet-s-founding-fathers-with-extremism
 lahatsoratra bilaogy: http://dolboeb.livejournal.com/2854350.html
 teo aloha: https://lenizdat.ru/articles/1133094/
 nilaza : http://kommersant.ru/doc/3093719
 Niaro tena : http://www.newsru.com/russia/19sep2016/nosik.html